FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA SY DEPIOTE : Nanampy vola 2,2 tapitrisa dolara sy helikôptera ny Sadc
Mpifidy 140 000 hetsy no hiditra amin’ilay lisi-pifidianana fanampiny ka afaka hifidy mandritra ny fifidianana depiote sy filoham-pirenena fihodinana faharoa hatao ny 20 desambra izao. 2 décembre 2013
Fanazavana nentin’ny Vomiera Mahaleontena misahana ny fifidianana mandritra ny Tetezamita (Cenit), no nahafantarana izany omaly nandritra ny fiofanana niaraka Vondron’ny tany miteny Frantsay, teny Alarobia.
Ny Fitsarana ambaratonga voalohany mandray sy mandinika ny fitoriana faobe mahakasika ireo mpifidy latsaka na tsy voaisa tamin’ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany anefa no nambara fa tompon’ny teny farany mahakasika ireto olona nampidirina ao anatin’ny lisitra fanampiny izay manampy ireo 9 800 000 tamin’ilay lisitra voalohany.
Rahampitso no fantatra fa hamoaka ny didim-pitsarana momba ireo mpifidy ireo ny Fitsarana ka amin’ny herinandro efa fantatra ny lisitra ofisialy. Amin’iny herinandro ihany koa araka ny fanazavana nentin’ny filohan’ny Cenit, Atallah Béatrice no ho tonga eto amintsika ny bileta tokana vao avy natonta tany Afrika Atsimo ary haparitaka manerana ny Distrika andro vitsy aorian’ny hahatongavany eto.
Mpikamban’ny Vaomiera mpikarakara ny fifidianana amin’ireo firenena ao anatin’ny Vondron’ny tany miteny frantsay (OIF), ahitana an’i Mali, Burkina Faso, Congo sy Cameroun no mizara traikefa amin’ireo mpikamban’ny Cenit mba hiatrehana ny fifidianana roa miaraka araka ny tokony ho izy. Nampanantena ny hiasa ao anatin’ny matihanina tanteraka, hitandro ny tsy fitanilana ny ekipan’i Atallah Béatrice. Ho fanantsarana ny fomba fiasa no anaovana ity atrikasa ity.
Hotohizana amin’ny fanofanana ny rantsan ‘ny Ceni-T any amin’ny faritra izany amin’ny herinandro. Nanampy vola 2,2 tapitrisa dolara hahafahana mampitombo isa ireo angidimby miasa ihany koa ny Sadc, araka ny fanazavana omaly hanafainganana ny fanangonana ny voka-pifidianana. Efa tapaky ny Cenit sy ireo mpiara-miombon’antoka aminy koa fa ampitomboina 15 000 Ariary ny tambin-karaman’ireo olona hiasa eny anivon’ny birao fandatsaham-bato.
Hitombo mantsy ny asa miandry azy ireo, raha mihoatra ny tamin’ny 25 oktobra teo. Hizara roa samihafa tsar any bileta ho ampiasaina ny 20 desambra izao, raha ny nohamafisin’ny Cenit ihany ka ny iray ho an’ny filoham-pirenena fihodinana faharoa ary ny faharoa ho an’ny fifidianana depiote. Vata fandatsaham-bato roa koa no hita eny amin’ny birao fandatsaham-bato.